Ingabe ukuthuthukiswa kwenjini yokusesha kushintshile incazelo yayo?
Akuyona imfihlo kunoma ubani ukuthi indawo yokumaketha yedijithali ishintsha kakhulu futhi ayihlali. Phakathi neminyaka embalwa edlule, i-Google yenza izinguquko ezinkulu ekusebenzeni kwayo kwezinhlelo. Injongo eyisisekelo yalezi zinguquko ukuthuthukisa isipiliyoni somsebenzisi ngamawebhusayithi afaka kwi-TOP. Namuhla, i-Google iba nenhlakanipho futhi ingahlola izinga lewebhusayithi ngezinga lezici. Yingakho isihloko sencazelo yokuthuthukisa injini isesidingo esikhulu. Ukuze uthole isikhundla esiphezulu, kufanele usebenzise zonke izindlela ezidingekayo zokusungula injini yokusesha okukhathazayo kokubili ukuphuculwa kwe-off-and-site. Kulesi sihloko, sizoxoxa ngokuthi i-Google algorithm updates ithonya kanjani abathengisi abasebenzisa ngokusemthethweni amasu we-SEO nokuthi bangagcina kanjani izikhundla zesayithi uma imithetho ye-SEO game izoguqulwa.
Izinsika zamanje zokuthuthukisa injini yokusesha
Bonke ochwepheshe be-SEO bayavuma ukuthi kunesici esisodwa esingashintshi ekwenzeni ubuciko - okuqukethwe kwekhwalithi. Uma uqhubeka nokukhiqiza okuqukethwe okuphezulu, okuthola izixhumanisi ezifanele kwezinye izizinda ezigunyaziwe, isayithi lakho lizoba yi-TOP ngaphansi kwanoma yiziphi izimo. Noma kunjalo, indlela yokuthuthukisa inamba kanye nekhwalithi yezixhumanisi ezingenayo ziphelelwe yisikhathi. Njengamanje, udinga ukwakha umkhankaso wakho wokuphromotha ogxila ezintweni ezintathu eziyinhloko - okuqukethwe kwekhwalithi, ukumaketha kwezokuxhumana kwezenhlalo, nokwakha isixhumanisi. Ukuze uthole umphumela wokukhulisa okuphezulu kakhulu ku-rankings, udinga ukuhlanganisa zonke lezi zici zokuthuthukisa.
Namuhla, okuqukethwe kuye kwaba yindlela engathí sina phakathi kwabathengisi be-intanethi njengoba i-Google iqala ukubheka okuqukethwe okuphansi nokukopisha. Ukuze uthuthukise isikhundla sakho sewebhusayithi, udinga ngokuqhubekayo ukukhiqiza okuqukethwe okuphezulu futhi okubandakanya okuhambisana nezihloko zakho ze-market niche. Qiniseka ukuthi ufaka ngokuqondile amagama okusesha kokuqukethwe kwakho njengengxenye engezansi yencazelo ye-SEO. Ngaphezu kwalokho, udinga ukwenza okuqukethwe kwakho kuhlelwe ngokusebenzisa izinhlamvu, izigaba nezinhlu ezibalwe. I-Google ihlanganisa okuqukethwe okude nekhwalithi okungcono kunomfushane futhi okulula.
Ijusi yokuxhumanisa i-Organic
Ukwakhiwa kwezixhumanisi kuyindlela eqondile yokuthuthukisa iwebhusayithi okungenziwa kokubili ngokomzimba nangokwemvelo. Ukwakhiwa kwesixhumanisi se-SEO noma se-white-hat kubhekisela ekutholeni ijusi yezixhumanisi kwisayithi ngezindlela zokuthumela ibhulogi, ukwabelana ngesixhumanisi, nokushicilela izincwadi. I-SEO engeyona engokwemvelo noma emnyama isho konke ukuthengiswa kokuxhumanisa nokuxhumanisa ukuxhumanisa. Yindlela elula yokuheha abasebenzisi. Kodwa-ke, udinga ukuqonda ukuthi abasebenzisi okuyi-site lakho ngokuxhumanisa kokuthenga angeke baphenduke amakhasimende akho. Ngaphezu kwalokho, lolu hlobo lwe-hat-hat optimization luhlawuliswa izinjini futhi lungalimala izikhundla zakho. Kufanele uthole izixhumanisi ngokusebenzisa ukuvumela esikhundleni sokuzikhokhela.
Udinga ukucabangela ukuthi indlela yokufaka umbhalo we-anchor ocebile wegama eliyinhloko ekukhishwa kwezindaba ku-intanethi kunanoma yiliphi inani ezinsukwini zangempela zokuthuthukisa. Namuhla i-Google ithatha izixhumanisi zombhalo we-anchor ekukhishwa kwezindaba kanye nezinye izincwadi ezijwayelekile njengezixhumanisi ezingekho emthethweni noma ezikhokhelwayo. I-Google ingathanda ukuyeka ukuhlanganiswa kwesixhumanisi esingavamile kusuka kokusakaza kokushicilelwa. Kodwa-ke, uma abanye abantu abacatshangwa ikakhulukazi babhala ngemikhiqizo yakho noma amasevisi bese ufaka izixhumanisi ezifanele kuwo, lokho kubhekwa njengesixhumanisi esivela ngokusemthethweni ku-Google.
Ubukhona bezenhlalo obuqinile
Futhi iphuzu lokugcina lomkhankaso wokulondoloza ngamunye. Namuhla, abasebenzisi abaningi beza kumawebhusayithi ngokusebenzisa iziteshi zokuxhumana zenhlalo njengoba bekhetha ukuthola ulwazi ngendlela ekhangayo nebonwayo. Ukuze uthuthukise ukuqashelwa komkhiqizo wakho, kusobala ukuthi udinga ukuba nesimo esiqinile sezenhlalakahle. Kuzokusiza ukuba usondelane namakhasimende akho angahle futhi uqonde izidingo zabo Source .